Kedu ụdị ụdị nkwalite arụmọrụ 6? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Mmezi arụmọrụ nke iwu - otu esi edozi
Mmezi arụmọrụ nke iwu - otu esi edozi
Kedu ụdị ụdị nkwalite arụmọrụ 6?
Pesdị ọgwụ na-eme ka arụ ọrụ. N'etiti ndị kasị ewu ewuPEDbụ ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa anabolic, hormone nke mmadụ na-eto eto, erythropoietin (EPO), ndị na-egbochi beta, ndị na-akpali akpali na ndị na-agwọ ọrịa ka a kpọọ mmadụ ole na ole.June 24. 2015 g.
bụ diamondback anyịnya igwe dị mma
Ruo ogologo oge ka egwuregwu dị, e nweela ndị na-eme egwuregwu na-achọ uru na ohere ọ bụla iji gosi onwe ha ọkachamara na ọrụ taa wee gbanwee ọgwụ ndị na-eme ka arụ ọrụ. Nụ maka ya n’ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ n’egwuregwu ọ bụla. Na United States, e boro ụfọdụ ndị egwuregwu bọọlụ kacha mma oge niile ebubo iji PED.
A na-akwụsị ndị egwuregwu bọọlụ America mgbe niile maka ọdịda ọgwụ ọjọọ na usoro ahụ. Ma mgbe ahụ, e nwere ihe niile mgbada antler ịgba ihe. Enweghị ụkọ ụzọ ndị egwuregwu na-achọ iji melite arụmọrụ ha.
Offọdụ n’ime ha na-arụ ọrụ, mana nke na-efu nnukwu ego, ahụ ike ha, na ndị ọzọ anaghị arụ ọrụ ọ bụla. Yabụ kedu nke bụ etu esi arụ ọrụ ma ghara ịrụ ọrụ? Nye m nkeji ole na ole, m ga-enye gị ụfọdụ nkuzi sayensị banyere ihe kpatara na ndị scammers anaghị emeri. Anyị na-akpọ ha ọgwụ ọjọọ, mana imirikiti ndị na-akwalite arụmọrụ bụ naanị nsụgharị nke kemịkal ị nwererịrị n'ime ahụ gị.
Ndị a bụ njikọ ahụ gị na-eji wuo ma gwọọ onwe ya ma debe onwe gị ahụike, na-enwe olileanya ịpụtakwu n'ahụ gị, ị nwere ike mechaa banye ụwa mgbu. HGH, ma ọ bụ hormone na-eto eto mmadụ, bụ ebe dị mma ịmalite. N’agbanyeghi na anyi niile nwere ya, otutu mmadu amaghi ihe o bu.
Ahụ gị na-emepụta HGH site na pituitary gland na ntọala nke ụbụrụ gị. Ọ na - akpali uto na sel mmepe, na - arụkọ ọrụ na homonụ ọzọ ana - akpọ insulin-like growth factor-1, nke a makwaara dị ka IGF1. HGH gbanwere IGF1 n'ime imeju ma nwee ọtụtụ mmetụta na ahụ niile gụnyere ụba ọkpụkpụ na uto ahụ.
Nmeputa ihe okike nke HGH na-eto eto n'oge afọ iri na ụma, na-agbada site na afọ 30, ma na-agbada na ndụ gị niile. Mkpụrụ hormone na-eto eto na-enyere aka ịchịkwa metabolism na ndị okenye, mana isi nzube ya bụ iji kpalite uto n'oge nwata. Beendị injectable nke HGH ka emepụtara site na 1985 wee kwado ya na U.S.
Nchịkwa nri na ọgwụ maka ọgwụgwọ nke ụmụaka nwere nsogbu uto, nsogbu mkpụrụ ndụ ihe nketa, na nsogbu akụrụ. Maka ndị okenye, HGH nwere ike ịdebere ya maka ọnọdụ dị ka ọkpụkpụ ọkpụkpụ ma ọ bụ cholesterol dị elu, ma ọ bụ etuto ahụ na-adịghị ahụkebe. N’agbanyeghi oke onu ahia ya; onyinye HGH kwa ọnwa nwere ike iri puku dollar ise.
Mkpụrụ hormone nke ụmụ mmadụ na-eto eto na-ewu ewu na ndị na-eme egwuregwu na-achọ uru. Nnukwu ihe kpatara nke a bụ na ọ na-esiri ike ịhụ n'ihi na onye ọ bụla na-emepụta ya. HGH na-amalitekwa ịkụda n'ime nkeji 30 nke ogwu ogbugba, yabụ ọbụlagodi ule kachasị mma nwere ike ịchọpụta ya site n'ọkwa dị elu nke ụfọdụ ọgwụ nje n'ime ọbara n'ime 12 ruo 24 awa.
Mana lee ihe. N'ezie, maka ndị niile na-eme egwuregwu na ọtụtụ egwuregwu na-eji HGH, enwere obere ihe akaebe na ọ na-enye nkwalite arụmọrụ ọ bụla. HGH nwere ike ịkpalite ahụ ike na ọkpụkpụ, mana ma nke a na - eduga n'ike ma ọ bụ ntachi obi adịghị ama.
Ndị na-eme nnyocha na California mere nyocha na nso nso a banyere ọmụmụ ihe 44 nke uto hormone na ndị na-eme egwuregwu. Ihe karịrị ndị ọrụ afọ ofufo 300 na ihe ọmụmụ ndị a niile nwetara ngụkọta nke ụbọchị iri abụọ nke ọgwụ ogwu ọgwụ, dịka usoro ọgwụ ndị ọkachamara na-eme egwuregwu nwere ike iji. Ọ bụ ezie na ndị natara HGH kama placebo mụbara ahụ ha na-ebuwanye ibu site na pound abụọ, enweghị mmụba a na-atụ atụ na ike ha ma ọ bụ ikike mmega ahụ.
E nwere otu ọmụmụ ihe niile gosipụtara mmetụta dị mma nke uto hormone na arụmọrụ egwuregwu - Mahadum nke Queensland sayensị na Australia lere ndị egwuregwu ntụrụndụ 103 anya na 2010 wee chọpụta na ndị were HGH enweghị ọganihu na ike ma ọ bụ ahụike zuru oke, agbanyeghị, ha Sprint ugboro na igwe kwụ otu ebe mma site 4%. Ọ gwụla. Ọ bụghị ọtụtụ ihe dị iche, mana na asọmpi 4% nwere ike ịbụ ọdịiche dị n'etiti mmeri ọla edo na imecha ikpeazụ.
Kedu ihe ọmụmụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ na-egbochi doping achọpụtala na mgbe ejiri HGH mee ihe na testosterone na ị maara ihe mgbakwasị ụkwụ nke hormone testosterone, arụmọrụ ka mma? Ọ bụrụ na ị sị na steroid nke anabolic merie onwe gị nrite ọla edo. M na-ekwu okwu banyere steroid tupu, mana ọ bụ ihe agaghị ekwe omume ikwu maka nkwalite arụmọrụ na-enweghị imetụ ha aka ọzọ. Steroid bụ ụdị egbugbere ọnụ ma ọ bụ abụba abụba, ahụ gị na-eme ụdị abụọ dị iche iche.
May nwere ike ịma nke ọma acorticosteroids. Mmoa gị hormone, nke a na-emepụta site na gland adrenal gị n'ebe ahụ na akụrụ gị, ha na-ejikwa ihe ndị dị ka ọrụ mgbochi, nzaghachi nrụgide, na ịchịkwa mbufụt. Enwere ike ịnyela gị ọgwụ bụ ụdị nsụgharị sịntetị nke steroid ndị a iji mesoo mmerụ nkwonkwo ma ọ bụ ọrịa autoimmune ma ọ bụ naanị ajọ nsị nke ivy nke mere m ji were ya.
Steroidsdị nke ọzọ nke steroid bụ orrogenic anabolic steroid. ihe kachasị mkpa bụ testosterone, nke, dịka ị maara, na-amịpụta njirimara nwoke na nwanyị. Ma ndị steroid nwekwara ogige ndị na-akpali njikọ nke protein na n'ikpeazụ eriri anụ ahụ ọhụrụ.
Ogwe ahụ ike
A na-akpọ usoro a anabolism na steroid nke na-enye ya ike anabolic steroid. Ọ bụrụ na ọ bụ nsụgharị sịntetik, a na-eji ndị ọjọọ ahụ eme ihe na-akwadoghị ma na-emegbu ndị egwuregwu, nke a nwere ike ịbụ okwu ka mma. Nchịkọta nke steroid na mmega ahụ nwere ike ime ka nwoke dịkwuo ike karịa 38 pasent ma ọ dịkarịa ala dị ka ụmụ nwanyị.
Anabolic steroid nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma, ọkachasị ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ na-eri ihe karịrị otu. Ndị na-eme egwuregwu na-a steroidsụkarị steroid na usoro nke na-adị n'etiti ọnwa atọ na ọnwa atọ mgbe ọzụzụ dị arọ na-apụ n'oge-oge. Nke a bụkwa mgbe ha agaghị enwe ike ịnwale ha.
Mgbe a na-agbanye ma ọ bụ ilo steroid ndị a, ha na-akwaga n'ime anụ ahụ, ebe ha na-etinye aka na ndị natara na membranes nwere sel muscle. Ndị nabatara na-ebute hormones steroid na cell cell, ebe ha na-akpali anabolism na njikọ nke protein. Mana steroid nke anabolic na-esokwa ụfọdụ mmetụta dị nro.
Ọdịdị nke testosterone dị elu abụghị naanị na-eduga n'ịgba aghara na agụụ mmekọahụ, mana, nke zuru oke, nwekwara ike iduga mpempe akwụkwọ, enweghị ike, na mmebi obi. N'ime ụmụ nwanyị, ndị steroid nwere ike ibute ntutu ihu, otutu, mmebi imeju, mbelata ara na mgbanwe ma ọ bụ nkwụsị zuru oke nke oge ịhụ nsọ. Ugbu a ị na-eche ihe m ga-emesi gị obi ike na ahụ a bụ kpamkpam steroid n'efu.
Echere m, ọ dị m mkpa ịdepụta mmetụta n'akụkụ ọzọ? Emela ihe ahụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị na-eme ka ikuku na-eme ihe ikuku, ọkachasị agbụrụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè, enwere m ike ịtụ aro ka ị ghara isonye na doping ọbara? Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na ndị ọzọ na-eme egwuregwu ntachi obi na-ejikarị ndị na-agwọ ọrịa anabolic eme ihe, ma ịpịnye ọbara na-aghọwanye ihe nkịtị, n'ụzọ buru ibu n'ihi na ọ na-esi ike nchọpụta. Typedị doping a n'ozuzu na-arụ ọrụ n'ụzọ abụọ.
N’ọtụtụ ọnọdụ, ma ọ bụ site n’ịnye ọbara kpọmkwem, ndị na-eme egwuregwu na-eji ọbara nke ha ma ọ bụ site n’ịgba ụdị eju ọgwụ ọzọ nke erythropoietin ma ọ bụ EPOa hormone, nke na-achịkwa mmepụta nke mkpụrụ ndụ ọbara uhie nke ahụ. N’ọnọdụ abụọ a, ebum n’uche bụ ime ka ọnụ ọgụgụ ọbara uhie uhie dị n’arụba bawanye iji nwekwuo ntachi obi. Mkpụrụ ndụ ọbara uhie na-eji protein a na-akpọ haemoglobin ijikọta na oxygen ma wụpụ ya n'ime ahụ dum.
Ebe ọ bụ na ahụ gị na-eji ihe ruru 20 ugboro karịa oxygen n'oge mmega ahụ siri ike, mgbe ahụ n'oge ezumike, mgbe ị nwere ike ịbawanye ọbara ọbara ọbara ọbara karịa ọbara ma ọ bụ jiri EPO, anụ ahụ gị nwere ike ịga n'ihu na-amịrị oxygen. mkpa ha na i nwere ike nọkwasi gị igwe kwụ otu ebe a otutu ogologo ma ọ bụ ihe ọ bụla. Tupu ị mara ihe na-emenụ, ị meriri n’ọsọ ịgba ọsọ a kacha mara amara n’ụwa site n’ịghọ aghụghọ ule.
mgbali taya igwe
Thewa dị egwu nke PED abụghị n'ezie na HGH steroid na doping ọbara. Ogologo oge ị na-ele anya, onye bịara abịa akụkọ nke ndị na-eme egwuregwu na-anwa iji uru wee ghọọ. Nke a gụnyere onye egwu bọọlụ Manny Ramirez, onye amachibidoro na gonadotropin chorionic mmadụ maka egwuregwu 50 na 2009 mgbe ọ nwalechara nke ọma.
Hormone nke ụmụ nwanyị na-emepụta n'oge afọ ime. Ọ tụgharịrị na ọ na - emekwa ka ogo ụmụ nwoke na - eto eto na nwoke ma nwee ike ịmụba spam. N'ụzọ na-emegide onwe ya, ọtụtụ ndị na-eji steroid eme ihe na-ewere HCG mgbe ha mụsịrị nwa.
E nweghịkwa PEDs na egwuregwu ebe ndị asọmpi chọrọ ịdị ike ma ọ bụ ngwa ngwa. Na 2008, e wepụrụ akara abụọ n'aka otu onye otu egwuregwu North Korea mgbe ọ nwalere ezigbo ihe maka propranolol. Propranollis bụ ọgwụ eji agwọ ọbara mgbali elu na igbochi ịma jijiji.
Egwuregwu a na-ekwu okwu ya na-agbapụ. Ojiji PED yiri ya bụkwa nsogbu na ụwa ịgba ụta, ebe aka na-ama jijiji nwere ike ibute arụmọrụ adịghị mma. Ma enwekwere mgbada mgbada.
A PED nke ị nwere ike ịmaghị dị ruo 2012. N'oge ahụ, onye ọkpụkpọ NFL Ray Lewis kwetara iji ihe ndị ahụ na-enwe olileanya na ọ ga-agbake ngwa ngwa mgbe ọ gbasịrị biceps. Anụ ahụ velvety nke mgbada na-eto eto nwere nnukwu ogo IGF1, nke m kwuru na mbụ.
Nke a bụ akụkụ ụfọdụ ihe mere antle ji eto ngwa ngwa. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-ekwu na ha nwere ike wepụ homonụ a site na anụ ahụ wee tinye ya na ịgba nke a ga-enye n'okpuru ire. O doro anya na ọ ga-eju gị anya ịnụ na ọ nweghị ihe akaebe na enwere ike iji IGF1 rụọ ọrụ na pill ma ọ bụ fesaa ya site na otu, ọbụlagodi na homonụ sitere na ndanda na ụfọdụ mgbakwunye mgbada na New Zealand Market.
Ya mere, nke a bụ ndụmọdụ m nye ndị niile na-eme egwuregwu nọ ebe ahụ, nhọrọ bụ ịgbanye onwe gị na testosterone nke sịntetik nke ga-eme ka ị dị ọcha ma ghara inwe ike ịgbanwe oke ọbara ị nwere n'ime ahụ gị ma ọ bụ zụta ụfọdụ ihe nzuzu, nke a na-ekwu na a ga-eme site na isi mgbada, ma tinye ya n'okpuru ire gị, m kwadoro ịghara ịhọrọ nke ọ bụla. Daalụ maka ikiri ihe omume sayensị a n'ụzọ pụrụ iche, na-ekele ndị na-akwado anyị n'okpuru ndị anyị na-enweghị ike ime nke a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, nkwupụta ma ọ bụ echiche maka anyị ị nwere ike ịchọta ha na nkwupụta ndị dị n'okpuru ma ọ bụ na Facebook na Twitter ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-ama gị, anyị nwere ike ịga YouTube.com/scishow ma denye aha nke ọma
Kedu ihe ọgwụ na-arụ ọrụ iwu?
Na United States (US), PES nwere ike ịkọwapụta yaiwuọnọdụ, ebeeiwuPES gụnyerebekeedị ka creatine monohydrate na amino acid na PES iwu na-akwadoghị gụnyere anabolic-androgenicsteroid(AAS) edeghị maka ebumnuche ahụike.Dec. 15 2020
Kedu ụfọdụ ihe atụ nke ọgwụ na-eme ka arụ ọrụ?
N'etiti ndị nọ n'afọ iri na ụma, ndị nkịtịarụmọrụ-ọgwụ na-abawanye uruna mgbakwunye gụnyere:
Creatine. Creatine bụ ihe na-eme n'ụdị dị naihearu a na-erekwa dị ka ihe na-ihe-ihe mgbakwunye.
Ndị na-aga n'ihu Steroid.
Amphetamines na ihe ndị ọzọ na-akpali akpali.
A .ụ kọfị.
Kedu ihe bụ PED kachasị?
IhePEDs a na-ejikarịbụ anabolic androgenic steroid, nke a maara maka ikike ha nwere iwulite ma wusie ike yana belata abụba ahụ. Ndị ọzọnkịtị PEDgụnyere: hormone nke mmadụ na-eto eto (HGH). Ndị na-eme egwuregwu na ndị ọzọ na-eto eto nwere ike iji ọgwụ a iji melite arụmọrụ ma mee ka ahụ ike.Dec. 1 2016
Ndi testosterone bu ihe nkwalite?
Fọdụ ndị na-eme egwuregwu na-aga ijetestosteroneịkwalite haarụmọrụ. Anabolic steroid nke ndị na-eme egwuregwu na-eji eme mgbanwetestosterone. Homonụ ndị a anabatala ọgwụ. Ma na-eme egwuregwuarụmọrụabụghị otu n’ime ha.
Kedu ihe kpatara amachibidoro ọgwụ na-eme ka arụmọrụ rụọ ọrụ?
Ihe meremmachibido iwubụkarị ihe ize ndụ ahụike nkearụmọrụ-ọgwụ na-abawanye uru, nhatanha nke ohere maka ndị na-eme egwuregwu, na ihe atụ n ofomi nkeogwu- egwuregwu efu maka ọha na eze. Ndị isi na-emegide ọgwụ ike na-ekwu na iji yaarụmọrụ-ọgwụ na-abawanye uruna-emegide 'mmụọ nke egwuregwu'.
Kedu ọgwụ ndị amachibidoro n'egwuregwu Olimpik?
“Ihe niile e kere eke na sịntetik cannabinoids bụmachibidoro, ”Ka ụlọ ọrụ ahụ na-ekwu, gụnyere' hashish, wii wii na ngwaahịa mmanya. ' United StatesOlimpikna Kọmitii Paralympic na-agbaso iwu WADA.6 ụbọchị gara aga
Kafiin ọ bụ ọgwụ na-eme ka mmadụ rụ ọrụ?
A .ụ kọfịegosila na ọ dị irè naime arụmọrụ. N'okpuru ebe a bụ nkọwa zuru ezu banyere ndị na-erite uru karịa, ndị na-eme egwuregwu a zụrụ azụ ma e jiri ya tụnyere ndị a na-azụghị azụ, ụmụ nwoke ma e jiri ha tụnyere ụmụ nwanyị na ndị egwuregwu egwuregwu aerobic vs anaerobic.A .ụ kọfịna nkewa dị ka a stimulantogwu.
Masturbation ọ na-ebelata testosterone?
Ọtụtụ ndị kwenyere na nke ahụmasturbation na-emetụtanwoketestosterone etoju, ma nke a abụchaghị eziokwu.Masturbation na-emeO yighị ka ọ ga-enwe mmetụta na-adịte aka natestosterone etoju. Otú ọ dị,igbo onwenwere ike inwe mmetụta dị mkpirikpi naetojunke hormone a.
Femalemụ nwanyị na-eme egwuregwu nwere ike ịnara testosterone?
Iwu IAAF ọhụrụ chọrọ DSDndị na-eme egwuregwuilekọta atestosteroneọkwa nke 5 nmol / L maka opekata mpe ọnwa isii na-aga n'ihu iji nwee ike ịsọ mpi dị kanwanyi.15 nke Dec 2019
Gịnị bụ ụfọdụ n'ime iwu arụmọrụ ọgwụ?
N'ime ndepụta a n'okpuru, anyị ga-ahụ na enwekwara ọgwụ na-eme ka ọgwụ na-abawanye. Amino acid nwere njikọ ma ọ bụ BCAA (leucine, isoleucine, na valine). Nke a na-emetụta site na mitochondria na akwara skeletal iji nweta ike. Tribulus Terrestris. Ngwurugwu a na-eme ka testosterone na luteinizing hormone dịkwuo elu. Creatine.
Kedu ihe nkwalite arụmọrụ kacha mma maka egwuregwu?
Nnukwu isii (Iwu) arụ ọrụ maka egwuregwu ma ọ bụ ahụike 1 Co-enzyme Q10 (CoQ10) 2 Chromium Picolinate 3 Naghachi - Amino Power 4 Caffeine 5 Motivator 6 Race Caps Supreme
ibu tcx nyochaa
Ọ nwere ihe karịrị counter ịrụ ọrụ ọgwụ?
Ọ bụrụ n’ịchọ iji ọgwụ ọjọọ na - eme ka ọgwụ na - abawanye uru, anyị maara ihe kacha mma maka gị. N'akụkụ a ma dabere na ọmụmụ anyị na-atụ aro iji D-Bal Crazy Bulk, nke a maara dị ka iwu Dianabol kachasị mma.